ပင်မစာမျက်နှာ / ဘ‌‌လော့ခ် / တရုတ်မိသားစုများ၊ တတိယအကြိမ်ခွဲခြားခြင်းခံထိုက်သည်မဟုတ်လော
2020 / 10 / 17 အမြိုးခှဲခွားခွငျးဘ‌‌လော့ခ် 3003 0
ဒါပေမဲ့ဂျပန်အိမ်သာအကြောင်းငါ့ကိုအထင်ကြီးစရာကဘာလဲ ရယ်စရာကောင်းတဲ့သန့်ရှင်းသပ်ရပ်တဲ့ဒီဇိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အိမ်သာကိုအသုံးပြုကြသည်လမ်း။
ကျနော်တို့ခွဲခြားမှုသုံးခုကိုအရင်ကမိတ်ဆက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒီခွဲစိတ်မှုသုံးခုကိုဒီနေ့ထပ်ပြီးဖော်ပြရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုနားမလည်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကိုငါတို့တွေ့ခဲ့လို့ပါ။ ခွဲခြားခြင်းသုံးခုဆိုတာဘာလဲ၊ သူတို့ကသူတို့လိုအပ်တာလား၊ မလိုအပ်လားဆိုတာကိုသေချာမစဉ်းစားဘဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသုံးခုရဲ့အကျိုးအတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုပဲလိုက်ကြတာပါ။
ဒီတော့ဒီနေ့ငါတို့စကားပြောကောင်းကောင်းပြောမယ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးခုအတိအကျဘာလဲ, သုံးခွဲခြာလိုအပ်ပါသည်ဖြစ်စေမ။
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည်သီးခြားခွဲခြားခြင်းသုံးခု၏အယူအဆကိုရှင်းလင်းရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ကွဲကွာနေလျှင်ပင်ရေချိုးခန်းတံခါးကိုဖန်ခွက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ရေချိုးခန်းကုလားကာထပ်ထည့်ရန်မလိုပေ။
အစစ်အမှန်ခွဲခြားထားမှုသုံးခုကဆိုလိုသည်မှာရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာနှင့်ရေချိုးခန်းအကန့်များသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး နေရာမတူခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်လူသုံး ဦး သုံးနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသုံးခုသည်သီးခြားအခန်းသုံးခန်းဖြစ်ပြီးရေချိုးခန်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မျှဝေပါလိမ့်မည်၊
ဒုတိယအချက်မှာဒုတိယအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အိမ်သာကိုလွတ်လပ်သောtwoရိယာနှစ်ခုအဖြစ်ခွဲထားသည်။ လူနှစ် ဦး သည်ရေချိုးခန်းကိုတစ်ချိန်တည်းအသုံးပြုကြသည်။
ပြီးတော့နောက်ထပ်အကောင်းဆုံးအရာက“ စိုစွတ်သောခြောက်သွေ့သောခွဲခြာမှု” ကိုအမှီသဟဲပြုပြီးလွတ်လပ်သောအပူအအေးဆုံးသောရေချိုးခန်းကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ရေချိုးခန်းသို့ရေချိုးခန်းတစ်ခုလုံးကိုစိုစွတ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ပေါင်းစည်းထားသောရေချိုးခန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နှစ်ခုခွဲခြင်းနှင့်သုံးခွဲခြာ စိုစွတ်သောနှင့်ခြောက်သွေ့သောခွဲခြားမှုကိုရရှိနိုင်ပါသည်၊ ၎င်းသည်ရေချိုးခန်းသုံးခြင်း၏သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပါသည်။
နှစ်ခုခွဲခြာနှိုင်းယှဉ်, သုံးပိုင်းခွဲထားသည့်ရေချိုးခန်းသည်လုံးဝအမှီအခိုကင်းသည်။ စိုစွတ်သောနေရာနှင့်ခြောက်သွေ့မှုကို ပို၍ စေ့စေ့စပ်စပ်ရရှိနိုင်ရန်နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်မိသားစုအားပcontrိပက္ခများနှင့်ဖိအားများအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုသက်သာစေနိုင်သည့်အပြင်ရေချိုးခန်းအသုံးပြုမှု၏ထိရောက်မှုကိုများစွာတိုးတက်စေသည်။
မိသားစုသုံးစုကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ညမှာအမေရေသောက်နေတုန်းအဖေအိမ်သာသွားပြီးကလေးတွေလည်းတစ်ချိန်တည်းမှာဆေးကြောနိုင်တယ်။ အကယ်၍ လူ ဦး ရေတိုးပွားလာပါကတူညီသောအိမ်ထောင်စုတွင်မျိုးဆက်သုံးဆက်ရှိလျှင်၊ သုံးဆခွဲခြားခြင်း၏အားသာချက်များမှာ ပို၍ ထင်ရှားသည်။
အဘယ်သူမျှမ, သင်တန်းမဟုတ်, နှင့် Out-Context-out touting ပျင်းရိသည်။ သုံးပိုင်းခွဲခြင်း၏အားသာချက်များမှာများစွာသော (မဟုတ်လျှင်လူကြိုက်များလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း) သွင်းကုန်တစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းတို့ကိုရေလောင်းနိုင်သည်။
ဂျပန်မိသားစုများကထိုသုံးမျိုးအားခွဲခြားလိုသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာသူတို့၏အတွေးအခေါ်၊ ရေချိုးခြင်းနှင့်အိမ်သာသို့သွားခြင်းကိုအတူတကွခွင့်မပြုခြင်း၊ တစ်ခုမှာ“ သန့်ရှင်းရေး” ရန်နေရာနှင့်နောက်တစ်ခုမှာ“ မိလ္လာ” အတွက်ဖြစ်သည် ။
ထို့ကြောင့်၊ ခွဲခြားခြင်း (၃) ခုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏သဘောထားသည်သင့်၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်မှမဟုတ်ဘဲလက်တွေ့ကျသောရှုထောင့်မှထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
အမှန်တကယ်သုံးသီးခြားလိုအပ်တဲ့အိမ်အတွက်ပထမ ဦး စွာအိမ်၌နေထိုင်သူလူ ဦး ရေသည်အနည်းဆုံး ၃ နှင့်အထက်ရှိရမည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်မလိုအပ်ပါဘူး။
ဒုတိယအ အိမ်မှာရေချိုးခန်းတစ်လုံးပဲရှိတယ်။ အကယ်၍ မိသားစုတွင်ရေချိုးခန်းနှစ်လုံးပါ ၀ င်ပါကနှစ်ခုလုံးသီးခြားစီပြုလုပ်နေသကဲ့သို့ပင်၎င်းသည်နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုနှင့်လည်းပြီးပြည့်စုံနိုင်သည်။
စဉ်းစားရမည့်နောက်ဆုံးအရာမှာဟုတ်မဟုတ် မိသားစု ၀ င်များသည်ရေချိုးရန်လေ့ရှိသည်။ ရေချိုးရန်ရေသည်ရေချိုးသည်ထက် ပို၍ ကြာမည်ဖြစ်ပြီးရေချိုးကန်သည်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တည်းသာအသုံးပြုနိုင်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်မိသားစုကြီးများအနေဖြင့်အပန်းဖြေရန်အတွက်ရေချိုးရန်ရေချိုးကန်ကိုသီးခြားခွဲထားရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဂျပန်လူမျိုးများသည်ရေချိုးခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။
ရေချိုးခန်း၏ပုံမှန်ပုံစံများမှာ - ဒေါင်လိုက်ချောင်း၊ အလျားလိုက်အစင်းနှင့်စတုရန်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ စတုရန်း ရေချိုးခန်း, အခြားတစ်ဖက်တွင်, လိုအပ်လိမ့်မယ် 4.6.ရိယာမှာအနည်းဆုံး ၄.၆ စတုရန်းမီတာရှိသည်။ မစ္စ Walkie ၏ခန့်မှန်းချက်အရသိရသည်။
သင်အဆင်ပြေပါကအသုံးပြုလိုပါကareaရိယာ အကြောင်းကို6စတုရန်းမီတာဖြစ်သင့်သည်။
ပါးလွှာသောအိမ်သာနှင့်ပတ်သက်လျှင် ...... ၎င်းကိုမတတ်နိုင်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အတွင်းအကျဆုံးအိမ်ရာသို့ရောက်ရန်အိမ်သာကိုဖြတ်သန်းရလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်တည်း။ (ပြောင်းလဲနေသောလိုင်းဖြစ်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် ③ → ② → ①). အကယ်၍ ၎င်းကိုအောင်မြင်နိုင်ပါကနံရံကိုဖယ်ရှားရန်လိုအပ်သည်။
ရှင်းနေသည်မှာအချက်တစ်ခုသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ရသောရွေးချယ်မှုသည်ဖြစ်သည် သုံးခွဲသို့မဟုတ်နှစ်ခုခွဲခြားရှိသည်ဖို့ရှိမရှိ။
အခုတော့ရေချိုးခန်းထဲမှာသုံးမျိုးခွဲခြားခြင်းဟာအရမ်းပူလွန်းတယ်။ နှစ်သိမ့်မှုနဲ့အသုံး ၀ င်မှုနှစ်ခုလုံးဟာသူတို့ရဲ့သိသာထင်ရှားသောအားသာချက်များကြောင့်ငါကိုယ်တိုင်ခွဲထုတ်ခြင်းသုံးခုကိုထောက်ခံသူဖြစ်သည်။
သို့သော်လိမ္မော်ရောင်ကို Huainan တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးလိမ္မော်ရောင်ဖြစ်သည်။ Huabei တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး Hovenia ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကအဆုံး၌ဒေသအလိုက်အခြေအနေများအရ ၄ င်းတို့၏လူနေမှုအညွှန်းကိန်း၏ပျော်ရွှင်မှုကိုအမှန်တကယ်တိုးတက်အောင်မလုပ်နိုင်သည်ကိုသိရန်။
ဥပမာအားဖြင့်မကြာသေးမီကအလှဆင်ထားသောအလှဆင်ထားသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး သည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲချက်နှစ်ခုကိုရရှိခဲ့သည်၊ ရေချိုးခန်း၏ဒီဇိုင်းမှာသီးခြားနှစ်ခုနှင့်သုံးသီးခြားဖြစ်သည်။
နှစ်သီးခြားဒီဇိုင်းသည်အသုံးအများဆုံးအပြင်အဆင်ဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းနှစ်ခုသည်လုံးဝကောင်းသည်၊ မဆိုးပါ၊ နှစ်မျိုးလုံးသည်အာကာသအသုံးချမှုနှင့်သင့်လျော်သည်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်ဒုတိယခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာသူသည်အခန်းကိုရေချိုးခန်းနှင့်ကပ်လျက်လေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားအိမ်သည်များသောအားဖြင့်တစ် ဦး တည်းနေထိုင်သောလူဖြစ်သည်၊ ခွဲခြားခြင်းသုံးမျိုးမပြုလုပ်ရ။
သုံးလမ်းခွဲသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အားသာချက်များရှိပြီးမိသားစုကြီးတစ်ခုအတွက်နှစ်လမ်းခွဲထက် ပို၍ အဆင်ပြေသည်။ သို့သော်ဒုတိယခွဲခြာမှုသည်နေရာနည်းသွားပြီးမိသားစုငယ်များအတွက်ပိုမိုသင့်လျော်သည်။
သုံးပိုင်းခွဲခြင်း (သို့) နှစ်ပိုင်းခွဲခြင်းအကြားရွေးချယ်မှုသည် fad ဟုခေါ်သော fad ကိုလိုက်စားခြင်းထက်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လက်တွေ့လိုအပ်ချက်များအပေါ်တွင်အခြေခံသင့်သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ပညာသင်ကြားခဲ့သောသူငယ်ချင်းတစ် ဦး သည် ၃၈ စတုရန်းမီတာရှိသောတိုက်ခန်းတစ်ခန်းကိုအလျားလိုက်အလျားလိုက်သုံးပိုင်းခွဲထားသောရေချိုးခန်း၊ အလယ်ပိုင်းတွင်စုပ်၊ လက်ဝဲဘက်ရှိရေချိုးခန်း + ရေချိုးကန်နှင့်ညာဘက်တွင်အိမ်သာတစ်လုံးစီရှိသည်။
သို့သော်မကြာသေးမီကအိမ်သစ်သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သောနောက်ဆွေမျိုးတစ် ဦး ဖြစ်သည့်ငါးယောက်၏မိသားစုအနေဖြင့်သူမပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမပြုမီသူမသုံးပိုင်းခွဲထားသောရေချိုးခန်းလိုအပ်ကြောင်းဒီဇိုင်နာအားပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော်မူလအိမ်သာ4ရိယာမှာ ၄ စတုရန်းမီတာသာရှိသဖြင့်အိမ်သာexpandရိယာကိုတိုးချဲ့ရန်အတွက်အနီးရှိအိပ်ခန်းမှ ၂ စတုရန်းမီတာကိုငှားခဲ့သည်။
ညဘက်မှာယောက္ခမကသူ့ကလေးကိုရေချိုးခန်းထဲမှာရေချိုးလိုက်တဲ့အခါကျွန်မယောက်ျားကရေချိုးခန်းကိုသွားပြီးဆေးကြောပြီးတဲ့နောက်ကျွန်မအိပ်ရာဝင်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မစောင့်ရဘူး။ အိပ်ခန်းအနည်းငယ်သေးငယ်သွားပေမယ့်ငါလုံးဝနောင်တမရကြဘူး။
ဤဥပမာနှစ်ခုဖြင့်မှန်ကန်သော (သို့) မှားသောအဖြေကိုသင့်အားပြရန်ဖြစ်သည် သုံးခွဲသို့မဟုတ်နှစ်ခုခွဲ၏ရွေးချယ်မှုသင်သာသိသည်။
ရှေ့သို့ :: တစ်နေရာတည်း၌အကောင်းဆုံးရေချိုးခန်း၊ နောက်တစ်ခု: Leaky Faucet? Rusty? ရေကနှေးနေသလား။ ၎င်းကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်း
မီးဖိုချောင် faucets အစားထိုးဖို့ဘယ်လို?
2020 / 11 / 09 1755
အဘယ်ကြောင့်မှန်ကန်တဲ့မီးဖိုချောင် Faucet တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားစေ
2020 / 11 / 09 4640
အလွန်ကြီးစွာသောမီးဖိုချောင် Faucet စေ5အရာ
2020 / 11 / 08 1917
မီးဖိုချောင် Faucet ကိုဝယ်တဲ့အခါဘာလုပ်ရမလဲ
2020 / 11 / 02 2247
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ယူအက်စ်၏ရေချိုးခန်းရေစီးကြောင်းအစီရင်ခံစာ - စမတ်အိမ်သာများ၊ အာရုံခံကိရိယာများနှင့်စိတ်ကြိုက်လင်းနို့များ ...
2020 / 11 / 02 1888
2020 / 11 / 01 2171
အမည်ပြောင်: E-mail ကို:
၎င်းကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့် 1% 1 ကို ၀ ယ ်၍ ၁၀% လျှော့စျေးဖြင့်ဝယ်ပါ ထုတ်ပစ်